'Asisebona ómageza' sesishaya ngamasudi emsebenzini' | News24
'Asisebona ómageza' sesishaya ngamasudi emsebenzini'
Johannesburg - Isiphakamiso sokuba kugqokwe ngendlela ofuna abantu bakuthathengayo siyangokuthakaselwa e-Ivory Park ngaseThembisa, njengoba abashayeli bamatekisi kule ndawo sebegqoka amasudi uma beya emsebenzini.
NgoMsombuluko nangoLwesihlanu, kumele nakanjani uma ungumshayeli ongaphansi kwe-Ivory Park Taxi Association (IPTA) ugqoke ishethi, uthayi kanye nezicathulo ezicwebezelayo.
Abashayeli manje abasafuni ukubizwa ngomagesi empompini, kusho omunye wabashayeli kwiSowetan.
Futhi bathi abafuni abantu bacabange ukuthi bonke abashayeli bamatekisi abayihloniphi imithetho yomgwaqo.
Funda nalolu daba: Akulindeleke zihibe kowe-ANCYL eKZN
USimon Tshehle, 51, osebengumshayeli wamatekisi iminyaka engu-9 uthi yena manje usedume ngoma-quality ngenxa yendlela agqoka ngayo.
Unobhala jikelele we-IPTA, uSam Sibisi uthi: "Lokhu sakwenza ngoba sifuna abantu bayeke leli gama elithi ‘omageza’ kwinhlangano yethu.
Abashayeli bathi njengoba begqoka amasudi nje kusho khona ukuthi bayageza, akukwazi ukuthi bangagqoka amasudi bengagezi.